Wholesale Bucket Teeth Heavy Duty mpanamboatra sy mpamatsy |Pingtai
Adidy mavesatra ny nify siny
Fonosana antsipirihany: Kitapo plywood
Delivery fotoana: 7-30 andro
Vidin'ny vidiny: FOB / CIF / CFR
Inona no fizotran'ny nify siny excavator
Ny fizotran'ny nify siny excavator: fanariana fasika, fanariana forging, fanariana mazava tsara.
Ny nify siny excavator dia ampahany manan-danja azo ampiasaina amin'ny excavator.Mitovy amin’ny nifin’ny olombelona izy io.Izy io dia nify siny mitambatra voaforon'ny fototry ny nify sy ny tendron'ny nify, ary ampifandraisina amin'ny alàlan'ny tsorakazo pin.Satria ny ampahany tsy fahombiazan'ny nify siny dia ny tendron'ny nify, raha mbola azo atao ny manolo ny tendrony.
Fanasokajiana araka ny tontolo fampiasana ny nify siny excavator.Ny nify siny excavator dia azo zaraina ho nify vato (ampiasaina amin'ny akora vy, akora vato, sns.), nify fanasan-tany (ampiasaina amin'ny fandavahana tany, fasika, sns.), nify kesika (ampiasaina amin'ny fitrandrahana arintany).
Excavator siny nify azo zaraina ho marindrano Pin siny nify (Hitachi excavator), marindrano Pin siny nify (Komatsu excavator, Caterpillar excavator, Daewoo excavator, Kobelco excavator, sns), rotary nihady siny nify (V andiany siny nify).
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny nify bucket
Famaritana: ASA MAFY NY FIHATRANAN'NY NIFY BUCKET
Fahaizana famatsiana: 10000 PCS / volana
Fitaovana: Alloy vy
teknika: Fandrefesana tsara / fametahana
kalitao: asa mavesatra ny fitrandrahana
Fotoana antoka: 24 volana
Serivisy aorian'ny varotra: Fanohanana ara-teknika video, Fanohanana an-tserasera
loko: Mavo na mena na mainty na mpanjifa ilaina
Ahoana no hitsarana ny nify siny tsy mahafeno ny excavator
Ny nifin'ny siny excavator ao anatin'ny fepetra miasa ara-dalàna mandritra ny 3 andro (36 ora eo ho eo) dia tsy hahafeno fepetra ho vokatra tsy mendrika.Misy fika mibaribary eo amin'ny nifin'ny siny ary misy fiovaovana plastika kely eo amin'ny tendrony.Ny famakafakana ny herin'ny nify siny miasa tava sy ny fifandraisana amin'ny zavatra nofongarina, amin'ny dingan'ny fitrandrahana feno amin'ny dingana samihafa amin'ny adin-tsaina samihafa, ny tendron'ny ampahany amin'ny fifandraisana voalohany amin'ny habakabaka, satria haingana ny hafainganam-pandeha, ny tendron'ny siny. nify noho ny fiantraikany mahery vaika.Raha ambany ny vokatra azo avy amin'ny nify siny, dia hamokatra fanimbana plastika eo amin'ny tendrony izany.Nototoina ireo nify siny tsy voafehy, nopotehina sy harafesina, ary hita fa volondavenona manjavozavo ny manodidina ary maizina ny afovoany, izay midika fa ny nifin’ny siny dia natsofoka.Ny singa fototra firaka (ampahany faobe%) dia 0.38C, 0.91Cr, 0.83Mn ary 0.92Si. Ny toetra mekanika amin'ny akora metaly dia miankina amin'ny firafitry ny fizotry ny fikarakarana hafanana amin'ny orinasa.
Inona no tombony amin'ny famokarana ny nify siny excavator an'ny orinasanay
Ny famakafakana ny fahombiazan'ny nify amin'ny alàlan'ny MLD-10 manao test machine test.Ny fanoheran'ny matrix sy ny fampidirana dia tsara kokoa noho ny an'ny vy 45 vonoina amin'ny toe-javatra misy fiantraikany kely.Amin'izay fotoana izay ihany koa dia tsy mitovy ny fanoherana ny matrix sy ny fampidirana.Ny matrix dia mahatohitra noho ny fampidirana.Ny fitambarana eo amin'ny lafiny roa amin'ny matrix sy ny fampidirana dia akaiky ny an'ny nify siny.Ny fampidirana ao amin'ny nify siny dia ny milalao ny anjara asan'ny vy mangatsiaka.Nandritra ny dingan'ny fanariana dia nodiovina ny voamatrix mba hanatsara ny tanjany sy ny fanoherana azy.Noho ny fiantraikan'ny fanariana hafanana, ny fampidirana dia mamokatra rafitra mitovy amin'ny faritra voakasika amin'ny hafanana, izay tsy mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fanoherana ny akanjo.Raha atao ny fitsaboana hafanana mety aorian'ny fanariana mba hanatsarana ny firafitry ny insert, dia hihatsara be ny fanoherana flax sy ny fiainan'ny nify siny.
1. Mpivarotra na mpanamboatra ianao?
Mpanamboatra manana zo fanondranana izahay.Ny orinasanay ao amin'ny tanànan'i Quanzhou Nanan, faritanin'i Fujian, Shina.Manana traikefa mihoatra ny telopolo taona izahay amin'ity indostria ity.
2. Ahoana no ahazoako antoka fa hifanaraka amin'ny bulldozer-ko ny ampahany?
Azafady mba sugesst anay ny laharan'ny maodely na ny laharana tany am-boalohany ny ampahany, dia hanome sary na handrefesana ny ara-batana habe sy hanamafy miaraka aminao.
3. Inona ny baiko farany ambany indrindra?
Miankina amin'ny karazana vokatra vidianao izany.Raha vokatra tsy tapaka ary manana tahiry izahay, dia tsy ilaina ny MOQ.
4. Afaka manampy ny mpanjifa ve ianao hamolavola vokatra vaovao?
Ny departemanta fampandrosoana ara-teknika dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana vokatra vaovao ho an'ny mpanjifa.Ny mpanjifa dia mila manome sary, refy na santionany tena izy ho fanondroanay.
5. Inona ny fotoana hitarika anao?
Ny fotoana fanaterana mahazatra dia iray volana eo ho eo, Raha manana tahiry mandritra ny herinandro eo ho eo
6. Ahoana ny momba ny fepetra fandoavam-bola?
T/T na L/C.ny teny hafa koa nifampiraharaha.
7. Afaka manao vokatra miaraka amin'ny marika ve ianao?
Azo antoka, faly izahay hiara-miasa amin'ny serivisy namboarina.
OEM / ODM dia tonga soa, Avy amin'ny foto-kevitra ho vita entana, manao ny rehetra (famolavolana, prototype famerenana, fitaovana sy ny famokarana) ao amin'ny orinasa.
1. Garantie iray taona, fanoloana maimaim-poana ho an'ny tapaka miaraka amin'ny fiainana tsy ara-dalàna.
2. Product customization OEM / ODM baiko.
3. Manome fanohanana ara-teknika an-tserasera na horonan-tsary ho an'ny mpanjifantsika.
4. Manampy anao hampivelatra ny tsenanao amin'ny serivisy avo lenta sy tsara indrindra.
5.VIP fitsaboana amin'ny mpandraharaha manokana.
teo aloha: Bucket Pin Heavy Adidy
Manaraka: Carrier Roller Mining Operation
Komatsu Undercarriage Part D475 Front Idler
kojakoja bulldozer D60
Ny kojakojan'ny siny excavator, Rollers Track fingotra, High Strength Bolt, Mitondra Track Roller, Excavator bucket fanapahana sisiny, Exkavator Undercarriage Wear,